Qaanuunka Arimaha Gaarka ah
Qaanuunka Arimaha gaarka kuu ah
Shabakadda SomaliCareers wuxuu u ruuriyaa oo uu isticmaalaa macluumaadka si uu iskugu xidho shaqo bixiyaasha iyo shaqo raadiyaasha iyo si uu u bixiyo adeegyo kale. Haddaba qaanuunka waxaanu ku koobaynaa sida xogta lasoo u ruriyey loo isticmaalayo. Waxaanu kugula talinaynaa inaad akhrido qaanuunka dhamaystiran si aad u hesho macluumaad ku saabsan sida aanu kuula macaamilayno waxa gaarka kuu ah.
Qaanuunka gaarkan ah waxa lagu dabaqayaa dhamaan xogta/macluumaadka aynu ku u rurino mareegaha oo loo isticmaalayo Shabakadda Somalicareers iyo kaabayaashaba.
Shabakadda SomaliCareers kama masuul aha qaanuunada gaarka ah ee dadka kale, si loo isticmaalo mareegaha kale, dhinaca saddexaad ee aanu la shaqayano iyo kuwa kale oo marin u heli kara macluumaad kale ee mareegayaasheena.
Macluumaadka aan u rurino.
Waxaanu u rurinaa macuulmaadkaaga marka aad is ticmaalayso Shabakadda SomalCareers. Waxaa kale oo aanu u ururinaa macaluumaadka aad na siisay sida: Meesha lagaaga soo xidhiidhayo, Cvga iyo xogtaada guud. Macaluumaadka ku saabasan sida aad u isticmaalayso shabakadda Somalicareers, tirikoobka iyo sidoo kale waxaan u rurinaa macluumaad ku saabsan qalabka aad isticmaalayso.
Sida aanu u isticmaalayno Macluumaadkaaga.
Macluumaadka aanu kaa ururino ee kugu saabsan waxa loo isticmaalayaa si laguugu soo diro adeega shakhsiyeed iyo in lagu siiyo xogta, si laguula soo xidhiidho iyo si loo hagaajiyo habka codsiga iyo adeegyada. Adeegyadayada waxa ku jira soo bandhigadda shakhsiga iyo xayaysiinta. Waxa kale oo aan ku sii kordhin karnaa macluumaadkaaga si aan kuula soo xidhiidho taasi oo ku saabsan fursadaha shaqo, iyo si aad uga qaybqaadato baadhitaanada/sahaminta iyo adeegyada kale ee la xidhiidha macluumaadka.
Shabakadda SomaliCareers waxay diyaariyeen cilad farsamo iyo abaabul oo lagama maarmaanka u ah sidii looga ilaalin lahaa macluumaadka shaqsiyadeed wixii ku saabsan khasaare ama dhaqan sharci daro ah. Waxaanu ku dadaalaynaa inaanu isticmaalno habka ugu adag amniga ee codsiyadihii ugu dambeeyey, si aanu u damaanad qaadno in xogaha gaarka ah la ilaaliyo intii suurta gal ah. Hasayeeshee ma damaanad qaadi karno in dhinacyada saddexaad ay si khaldan ay u isticmaali karaan waxyaala qaarkood. Waxaanu isticmaalnayaa habka shahaadiga ee SSL kaasi oo ilaalilanaya macluumadka xasaasiga ah sida xogta Kaadhkaaga, magacaaga, ereyga sirta iyo wixii lamida. Dhamaan macullmaadka oo dhan waa la xidhaa marka la dirayo.